Tilmaamaha cusub ee CDC ee dadka Mareykanka ah ee ku saabsan Omicron Covid Variant B.1.1.529
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Tilmaamaha cusub ee CDC ee dadka Mareykanka ah ee ku saabsan Omicron Covid Variant B.1.1.529
Bayaanka CDC ee ku saabsan sida si sax ah loogu fahmo nooca cusub ee Covid Variant Omicron
Noofambar 26, 2021, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu u kala saaray nooc cusub, B.1.1.529, inuu yahay Kala duwanaansho walaac waxayna u bixisay Omicron. Ilaa hadda ma jiraan wax kiisas ah oo kala duwan oo lagu aqoonsaday Maraykanka.
CDC waxay raacaysaa faahfaahinta kala duwanaanshahan cusub, oo markii ugu horreysay ay WHO u sheegtay Koonfur Afrika. Waxaan u mahadcelineynaa dowladda Koonfur Afrika iyo saynis yahanadeeda kuwaas oo si cad ula xiriiray bulshada sayniska caalamiga ah oo sii waday la wadaagida macluumaadka ku saabsan kala duwanaanshiyaha Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maraykanka iyo CDC. Waxaan la shaqeyneynaa Mareykanka iyo la-hawlgalayaasha caafimaadka guud ee caalamiga ah iyo warshadaha si aan wax badan uga ogaanno kala duwanaanshahan, inta aan sii wadno la socodka jidkiisa.
CDC waxay si joogto ah ula socotaa kala duwanaanshiyaha iyo nidaamka ilaalinta kala duwan ee Maraykanku wuxuu si kalsooni leh u ogaaday noocyo cusub oo dalkan ah. Waxaan filaynaa in Omicron si degdeg ah loo aqoonsan doono haddii ay ka soo baxdo Maraykanka
Waan ognahay waxa loo baahan yahay si looga hortago faafitaanka COVID-19. CDC waxay ku talinaysaa dadka inay raacaan xeeladaha ka hortagga sida xidhashada maaskaro gudaha goobaha guud ee gudaha meelaha muhiimka ah ama sare gudbinta bulshada, dhaqdhaqaa gacmahaaga si joogta ah, iyo jir ahaan ka fogaanshaha kuwa kale. CDC waxay kaloo ku talinaysaa in qof kasta oo 5 jir ah ama ka weyn uu iska ilaaliyo COVID-19 isagoo qaadaya si buuxda loo tallaalay. CDC waxay dhiirigelisaa qiyaasta kobcinta tallaalka COVID-19 ee kuwa u qalma.
Dadka safarka ku ah Mareykanka waa inay sii wataan raacitaanka Talooyinka CDC ee safarka.
CDC waxay bixin doontaa wararka cusub marka macluumaad badan la helo.